လက်စွဲသည့်အိမ်သာရေအဆို့ရှင်၊ ခြေနင်းပါအိမ်သာအဆို့ရှင်၊ တရုတ်နိုင်ငံမှအလိုအလျှောက်ဆေးကြောဆေးကြောပါ။
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:လက်ဆေးသည့်အိမ်သာအဆို့ရှင်,ခြေလျင်ခြေနင်းအိမ်သာအဆို့ရှင်,Flush Valve အလိုအလျှောက်,အများသုံးအိမ်သာအဆို့ရှင်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Flush Valve > Flush Valve အိမ်သာ
Flush Valve အိမ်သာ
Flush Valve အိမ်သာ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လက်ဆေးသည့်အိမ်သာအဆို့ရှင်, ခြေလျင်ခြေနင်းအိမ်သာအဆို့ရှင် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Flush Valve အလိုအလျှောက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Wall Mounted WC Flush Valve ၌တည်သည်
ပုန်းကွယ်အိမ်သာ Flush Valve
push ခလုတ်ပါသော Wall Moutned Toilet Flush Valve
အိမ်သာအတွက်လက် Push ရေချိုးခန်း WC Flush Valve
Flush Valve Toilet Button ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
နံရံကိုလက်ဖြင့်ဖိထားသော flush valve ကိုတပ်ဆင်ထားသည်
ဝင်ပေါက်တံတောင်ဆစ်နှင့်အတူ manual စာနယ်ဇင်း flush အဆို့ရှင်
Dual Wall တပ်ဆင်ထားသည့် Self Closing Flush Valves များ
Inlet Tube ဖြင့် Flush Valve ကိုဖိပေးပါ
ကြေးဝါအိမ်သာ Push Button Flush Valve
Self-close Push Button Flush Valve
အိမ်သာရှိ Pedal အမျိုးအစား Flush Valve
ခြေနင်း Self Closing အိမ်သာ Flush Valve နှောင့်နှေးခဲ့သည်
အပြည့်အဝကြေးနင်းအချိန် - ချုံး flush အဆို့ရှင်
ရေချိုးခြင်းခုံတွင် Chrome တွင်ပါ ၀ င်သည့် Flush Valve
ပုန်းကွယ်အိမ်သာ Flush Valve ပုန်း ကွယ်ထားသော အိမ်သာ flush valves များသည်အိမ်၌သော်လည်းကောင်း၊ အများသုံးအိမ်သာတွင်သော်လည်းကောင်းနေရာ ချွေတာ သည်။ ခလုတ်အမျိုးအစားအိမ်သာ flush အဆို့ရှင် သည်နံရံတွင်ဖြစ်စေ၊ ကက်ဘိနက်တပ်ဆင်မှုတွင်ပါရှိပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ရေအတွက်ခလုတ် နှိပ်၍ အလိုအလျောက်ပိတ်ပါ။ ဤအ ဖုံးကွယ်အိမ်သာ flush...
Flush Valve s ကို ပိတ်သောနံရံကိုယ်ထည်သည် အိမ်သာကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းမှာ chrome များအတွက် handle.High အရည်အသွေးကိုသောကြေးဝါသတ္တုများပုံသွန်းချတစ်ခုတည်း button ကိုတွန်းအားပေးငါးနှစ်အာမခံအာမခံချက်များအတွက် .Weight ရဲ့အရည်အသွေးကိုမဆိုလိုပေမယ့်နေရာလေးကိုလက်စွဲစာအုပ် flush Valve တစ် ll ကြေးနီသတ္တုများပုံသွန်းဖြစ်ပါတယ် 70 5...
Flush Valve Chrome မျက်နှာပြင်သည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးမှန်ကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်သည်တောက်ပသော၊ ချေးသည့်၊ သံချေးတက်။ ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အိမ်သာ flush အဆို့ရှင်သည်ကြေးဝါဖြစ်သည် ကိုယ်ထည်နှင့်အဆို့ရှင်အမာခံသည်၎င်းကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကြောင့်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအစားထိုးရလွယ်ကူခြင်း၊...
အိမ်သာအတွက် flush အဆို့ရှင်သည်မိမိကိုယ်မိမိပိတ်သောအဆို့ရှင်အမာခံ၊ Water Closet Flush Valve တာရှည်ခံအရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကြာရှည်စွာငွေအရောင်နှင့်ကြည်လင်နေစေပါသည်။ ၎င်းကို တွန်း ထုတ်လိုက်ပါကရေသည်စီးထွက်လာပြီး ၆-၉ စက္ကန့်အတွင်းအလိုအလျောက်ဆေးကြောပြီးလျှင်အလိုအလျောက်ပိတ်ပါလိမ့်မည်။...
အိမ်သာခတ်အဆို့ရှင် Push button Toilet flush valve သည်စီးပွားရေးအရ အိမ်သာ flush အဆို့ရှင် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြေးဝါများနှင့်ခရုမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ In-let water size G3 /4"or G1", out-let water size G1 "။ ထုတ်ကုန်၏အလုပ်လုပ်သောဖိအားသည် 0.05MPa မှ 0.9MPa ဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်မှာ ၀ ၀...
Handy's Wall သည်အိမ်စာထိုင်ခုံများကိုတပ်ဆင် ရန်သင့်လျော်သော လက်ဖြင့်ဖိထားသော flush valve ၊ Hand-push delay flush အဆို့ရှင် တွင်အ ဆို့ရှင်၏အဆို့ရှင် ၊ အလယ်အလတ်၊ လက်နှိပ်စက်မှထွက်သောရေထွက်ရှိမှု၊ ၃-၈ စက္ကန့်အကြာတွင်ရေသည်အလိုအလျောက်ပိတ်သွားလိမ့်မည်။ Handy ၏ နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော flushing အဆို့ရှင်...
Hand press-type flush valve Hand in ၏ရေဝင်ပေါက်တံတောင်ဆစ်နှင့်အလှဆင်အဖုံးတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောနံရံ ၀ င်ပေါက်ပိုက်များအတွက်သင့်တော်သောနေရာ၊ လက်စွဲစာနယ်ဇင်း flush အဆို့ရှင်ကို ၀ င်ရိုးတံနှင့် တပ်ဆင်သောအခါ ရေပိုက်အတွင်းရှိအနည်အနှစ်များ၊ စကေးစသဖြင့်အညစ်အကြေးများအားသန့်ရှင်းရန်အရေးကြီးသည်။...
Handy ၏ လက်ဖြင့်ဖိထားသည့်နောက်ဆို့နေသောအဆို့ရှင် သည်ကြေးနီဒြပ်ဆွဲအားသန့်ရှင်းသောသံမဏိသတ္တုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအကြမ်းခံပြီးအကြမ်းခံပါသည်။ Manual push-type flush valve အထူးကြေးနီအဆို့ရှင်တွင်ရေထုတ်လွှတ်မှုကြာချိန် - ၃ စက္ကန့်အထိရှိသည်။ ဤသည် လေးလမ်းသွား flush အဆို့ရှင် Push-button ကို switch သည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နှိပ်,...
ရွေးချယ်ထားသောအိမ်သာနှင့်တင့်ကားများအသုံးပြုရန်ဤအိမ်သာအဆို့ရှင်သည် ၃-၈ စက္ကန့်ခလုတ်ခလုတ်ကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ထားသည်။ အများပြည်သူအိမ်သာ flush အဆို့ရှင်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ထပ်တလဲလဲ flush ။ ရေဗီရို flush အဆို့ရှင်သည်မိမိကိုယ်မိမိပိတ်သောအဆို့ရှင်အဓိကနှင့်အတူအတော်လေးပိတ်လိုက်သည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ် flush value ၏လက်ကိုင်ကို flushing...
အိမ်သာထိုင်ခုံအတွက်နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် flush valve Public Toilet Flush Valves များသည်ကြီးမားသောကြေးဝါခရုမ်းအပြီးသတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ နှစ်စဉ် Flush Valve သည် G1 ဝင်ပေါက်အရွယ်အစား၊ အရွယ်အစား ၃၂ မီလီမီတာ။ ၃-၈ စက္ကန့်အကြာတွင်ရေသည်ပိတ်သည်။ ငါးနှစ်အာမခံချက်၊ ပူးတွဲတံတောင်ဆစ်နှင့်အလှဆင်အဖုံးများချိတ်ဆက်ထားသည် flush...
Flush Valve သည် ဟိုတယ်၊ ကျောင်း၊ ဘူတာ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ခလုတ်ကိုရေချွေတာခြင်းလက်စွဲပါ Flush Valve သည်လုံခြုံမှု၊ ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ပုံသေကိုယ်ထည်နှင့်ပုံသဏ္ingာန်ရှိသောကြေးဝါအလေးချိန်သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ အလွှာငါးခုဖြင့်ဖုံးထားသည်။ ကောင်းမွန်သော Water Closet Flush Valve...
အိမ်သာခတ်အဆို့ရှင် ဤသည် Stool Brass Flush Valve သည်အဓိကကိုယ်ထည်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော piston နှင့် chrome ပြီးသည်။ ၆ လမှ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းဖလင်ပြီးနောက်လက်ဖြင့်လည်ပတ်သည်မှာ Non-Hold ဖွင့်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်စွဲစာအုပ် Flush Valve Out-let ရေပိုက်အရွယ်အစား G1 "In-let ရေအရွယ်အစား...
အများသုံးအိမ်သာ USES squat lavatory flush အဆို့ရှင်သည်လက်ဖြင့်ထိတွေ့ပါကမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ pedal type flush အဆို့ရှင်ပြောင်းလဲမှုသည်အနည်းငယ်သန့်ရှင်းမှုအနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ Public Toilet Flush Valves များသည်အိမ်၌သော်လည်းကောင်း၊ အများသုံးအိမ်သာခြေနင်းခလုတ်တွင်သော်လည်းကောင်းကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသည်။...
အိမ်သာအဘို့အ flush အဆို့ရှင် ဒီ ခြေနင်း Toilet Flush Valve သည်ကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စတင်နှင့်ခရိုမီယမ်ပြီးဆုံးသည်။ ၆ လမှ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းဖလင်ပြီးနောက်လက်ဖြင့်လည်ပတ်သည်မှာ Non-Hold ဖွင့်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ဆေးသည့်အိမ်သာအဆို့ရှင် Out-let ရေပိုက်အရွယ်အစား G1...
ဖော်ထုတ် Foot- နင်းအိမ်သာ flush အဆို့ရှင် ဤသည် ထိတွေ့သောအိမ်သာ flush အဆို့ရှင် ကြေးဝါကိုပေါင်းစပ်သွန်း, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စတင်နှင့်ပွတ် Chrome ကို finish ကို, ဆူညံသံစစ်ဆင်ရေး။ သန့်ရှင်း။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် Out-let ရေပိုက်အရွယ်အစား G1 လက်မ၊ ၆-၉ လီတာ / မိနစ် ဖလတ်သည့်ခြေနင်းအိမ်သာအဆို့ရှင် ။...
အိမ်သာဖော်ပြချက်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - အမည် : ခြေနင်းနောက်ကျနေသော Self Closing အိမ်သာ Flush Valve M odel : HN-7L17C-2 ကုန်အမှတ်တံဆိပ် :...
Handy's Delay flushing အဆို့ရှင်၏ အင်္ဂါရပ်များ - နှောင့်နှေးသည့်မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်း၊ ရေစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို "တစ်ခု" ပုံသဏ္intoာန်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ Handy ၏ ခြေနင်း၏အချိန် - ချုံး flush အဆို့ရှင် သည်ကြေးနီ ကြောပိတ်ဆို့မှုကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ခြေဖြင့်နင်း နေသော flush အဆို့ရှင်...
သည့်အပေါ်ဒီတော့အိမ်သာအလုပ်လုပ်ကိုင်သောနေရာများအတွက် Valve ငါးခုအလွှာထဲမှာချထားတဲ့ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့် chrome တွင်ဖြစ်ပါသည်, Self-ပိတ်ပြီးပေနင်းအိမ်သာ flush အဆို့ရှင်ကိုရေဖိအားသင့်လျော်သည် flush သန့်စင်ခန်း, လေဆိပ်, ရထားဘူတာရုံနှင့်ဘူတာရုံဒီလက်စွဲစာအုပ် flush အဆို့ရှင်အလုပ်လုပ် toliet...
ရေချိုးခန်း - WC အိမ်သာအတွက်အသုံးပြုသော G1 "ဝင်ပေါက်ချိတ်ဆက်မှုပါသော ခြေထောက်ခြေနင်းပါအိမ်သာ ရေအ ဆို့ရှင်၊ ကြေးဝါ အိမ်သာ Flush Valve ။ Public Toilet flush valves များသည် chrome finish ကြေးဝါကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောရေချိုးခန်းအတွက် ရေခိုးရေပိုက်ခုံ ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်...
တရုတ်နိုင်ငံ Flush Valve အိမ်သာ ပေးသွင်း
Pedal Toilet flush အဆို့ရှင်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဆေးရုံ၊ ဘူတာ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကျောင်းစသည့်အများသုံးအိမ်သာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြေးဝါနှင့်ခရိုမီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ In-let water size G3 /4"or G1", out-let water size G1 "။ ထုတ်ကုန်၏အလုပ်လုပ်သောဖိအားသည် 0.05MPa မှ 0.9MPa ဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်မှာ ၀ ၀ ဒီဂရီထက်ပိုသည်။
Flush Valve အလိုအလျှောက်